Labadii Ambalaas Ee Cisbitaalka Boorama Oo Fadhiya, Agaasimaha Oo Shacabka Ugu Baaqay In Ay Isku Tashadaan Iyo Walaaca Bukaanada Covid19. |
Hargeysa(GNN):-Xaaladda Cisbitaalka Guud ee Magaalada Boorama ayay dadku cabasho ka muujinayaan kaasi oo la sheegay in dadka looga shakiyo cudurka Covid19 la geeyo iyada oo uu sidii hore dadka kalena loogu adeegayo halka ay dhammaanba labadii Ambalaas ee Cisbitaalkaasi lahaa ay fadhiyaan oo aanay shaqaynayn taasi oo uu qaylo dhaan ka diray Agaasimaha Cisbitaalkaasi oo shacabka reer Boorama ugu baaqay in ay isku tashadaan oo soo iibsadaan Ambalaas iyo wixii kale ee ay qabsan karaan ee loogu adeegayo.
Wariye Hoorri Axmed Hoorri oo ka tirsan Telefishanka HCTV oo shalay booqday Cisbitaalka guud ee Magaalada Boorama ayaa Agaasimaha guud ee Cisbitaalkaasi waxa uu waydiiyay sida ay isku qabanayaan in Cisbitaalku la tacaalo xaaladda Covid19 iyo xaaladdii bukaanada caadiga ah ee kale waxaanu Agaasimaha guud ee Cisbitaalka Guud ee Boorama yidhi: “Goobtan aan taaganahay waa goob lagu shaandheeyo bukaannada Covid19. Goobtani ma aha xaruntii cudurka Covid 19. Xarunta loogu tala galay cudurkaasi waa cisbitaalka TB-da ee la gayn doono dadka laga helo cudurkaasi. Bukaanka loo maleeyo in uu xanuunka Covid19 qabo ayaa halkan la keenayaa. Haddii loo arko in uu xanuunkaasi qabo ama looga shakiyo waxa la jiifinayaa qaybtan halkan aan joogno ee Cisbitaalka Guud. Haddii loo arko in uu isla ladan yahay oo iska fiican yahayna isaga oo aan cid kaleba arkin ayuu albaabka ka noqonayaa”. Ayuu yidhi Agaasimaha guud ee Cisbitaalka Guud.
Dhinaca kale Agaasimaha guud ee Cisbitaalka Guud ee Magaalada Boorama ayaa qaylo dhaan ka soo jeediyay Ambalaasyadii Cisbitaalkaasi oo laba ahaa kuwaasi oo gabi ahaanba fadhiya oo aan shaqaynayn wakhtigan waxaanu isaga oo arrintaa ka hadlaya yidhi: “Cisbitaalka Boorama waxa uu hore u lahaan jiray laba Ambalaas. Mid hore ayuu nooga fadhiyay kii kalena dhawaan ayuu naga fadhiistay. Isla markiiba wasiirka iyo masuuliyiinta kale ee wasaaraddaba waanu war galinay iyaguna dadaal bay ka galeen. Ka la is yidhi waa mustaqbal wanaagsan yahay oo waa lagu shaqayn karaa ayaa la jiiday kiibaa la soo hagaajinayaa in la helo Ambalaasyo ayaa muhiim ah oo dadweynuhu isku tashadaan xukuumaddu wixii ay karayso way noo samaynaysaaye. Shacabku waa in ay raadiyaan wixii ay ku baahi beeli lahaayeen. Taasaan ku talinayaa”.
Ugu dambayn Agaasimaha guud ee Cisbitaalka Magaalada Boorama ayaa ka hadlay xaaladda qalabka Oksajiinta ay u baahan yihiin dadka bukaanka ahi ee neefta siiya waxaanu yidhi: “Adeegga aan haysano ee imika ugu muhiimsani waa ka oksajiinta. Oksajiinta qofka ku jirtaa ama uu qaadanayaa haddii ay ku filnaan waydo waxa la siiyaa mid gaar ah. Haddii taasi ku fillaan waydo waxaad arkaysaa kuwan ayaa lagu xidhayaa haamaha ah”.